सूर्यविनायकमा दूध पोख्ने प्रहरीको फन्दामा ! भाइरल हुन दूध पोखेको खुलासा
गत साता भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकमा दूध पोख्ने डेरी सञ्चालक हि’रासतमा एक रात बसेर छुटेका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८ बलाँको टोल सूर्यविनायकमा रहेको रानीकोट डेरीका सञ्चालक मनोज श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले एक रात थुनेर छोडेको हो ।
श्रेष्ठले अरुको कुरा सुनेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन खानेकुरा फालेर गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन् । साथै, अबदेखि त्यस्तो गल्ती नगर्ने सर्तमा माफी मागेर छुटेका महानगरीय प्रहरी वृत जगातीले जानकारी दिएको छ ।
अभावको बेला सडकमा दूध पोखेर निषेधाज्ञाको बिरोध गरेको तथा अत्यावश्यक वस्तु नष्ट गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीब्र बि’रोध भएपछि जगाती प्रहरीले उनलाई प्र’क्राउ गरेको थियो ।
भदौ १३ गते शनिबार सूर्यविनायकमा रहेको रानीकोट डेरीले २२० लिटर दूध सडकमा पोखेको थियो । उनले भाइरल हुन खोज्दा गाली र सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन् ।